नासाले अन्तरिक्ष स्टेशनको लागि अर्को इस्पेसकार्गो प्रक्षेपणबारे दियो यस्तो जानकारी — Imandarmedia.com
एजेन्सी। नासाले अन्तरिक्ष स्टेशनको लागि अर्को इस्पेसकार्गो प्रक्षेपणबारे जानकारी दिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार मिडिया स्पेसएक्सको २३ औं कार्गो पुन: आपूर्ति मिशनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनमा प्रक्षेपण गरिने छ । फाल्कन ९ रकेटमा ड्र्यागन अन्तरिक्ष यानको लिफ्टअफ अगस्तको अन्ततिर फ्लोरिडाको केनेडी स्पेस सेन्टरमा कम्प्लेक्स ३९ए बाट लन्च लक्षित गरिएको छ।
अन्तरिक्ष यानले स्टेसनमा बिभिन्न नासा विज्ञान अनुसन्धानहरू प्रदान गर्दछ। यसले घनत्व नोक्सान रोकथाम र उपचारको बारेमा अध्ययनसहित, अन्वेषण उपकरणहरू पत्ता लगाउने र दृष्टि विकारहरूलाई कम गर्न सक्ने परीक्षण गर्ने र प्रदर्शनको लागि नयाँ रोबोटिक हातसहित प्रकोप राहत सहित पृथ्वीमा सम्भावित जानकारी पठाउनेछ।
त्यस्तै क्याप्सुलले कंक्रीट, फाइबरग्लास कम्पोजिटहरू र विकिरणको बिरूद्ध संरक्षण प्रदान गर्न सक्ने पदार्थहरू लगायतका सामग्रीहरू तथा अन्तरिक्षको कठोर वातावरणमा उनीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् भनेर अनुसन्धान पनि यसले गर्ने बताइएको छ ।
नासका अनुसार यो तेस्रो स्पेसएक्स मिसन हो। यसले एजेन्सीको दोस्रो वाणिज्य सहयोगी सेवा अनुबंध अन्तर्गत नासाको लागि विज्ञान अनुसन्धान, आपूर्ति र उपकरणहरू पुर्‍याउनेछ । अमेरिकाका कम्पनीहरूले कार्गोलाई पुनः समर्थन गरेमा अन्तरिक्षको एक मात्र प्रयोगशालामा नयाँ अनुसन्धान गर्ने नासाको क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि हुनसक्नेछ। ISS नेशनल लेबोरेटरी मार्फत अन्तरिक्ष स्टेशन अनुसन्धानले अन्य संयुक्त राज्य सरकारका एजेन्सीहरू, निजी उद्योग र शैक्षिक र अनुसन्धान संस्थाहरूलाई माइक्रोग्राविटी अनुसन्धान गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्दछ जसले नयाँ प्रविधि, चिकित्सा उपचार, र उत्पादहरू जुन पृथ्वीमा जीवन सुधार गर्दछ।
मानिसहरूले नोभेम्बर २००० देखि निरन्तर अन्तरिक्ष स्टेशनमा कब्जा गरिसकेका छन्। त्यस समयमा २४३ व्यक्ति र बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा वाणिज्यिक अन्तरिक्ष यानहरूले परिक्रमा प्रयोगशालाको भ्रमण गरेका छन्। अन्तरिक्ष स्टेशन अन्वेषणमा नासाको अर्को ठूलो छलाङ्कको लागि वसन्तबोर्ड रहन्छ ।
चिनियाँ सेना यु’द्धको तयारी गर्दै, लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा ५० हजार सैनिक र ड्रोन तैनाथ
चीन अदृश्य हाइपरसोनिक हतियार बनाउदै, विश्वभर तरङ्ग, के गर्ला अमेरिका ?
चिनियाँ सेनाले भारतीय सीमानमा अत्याधुनिक हतियार राखेपछि भारतमा खैलाबैला, के गर्लान मोदी ?
चीनसँग शीतयुद्धका लागि अमेरिका तयार, डोनाल्ड ट्रम्प भन्दा अघि सरे बाइडन
अदालतभित्र गो’ली चल्यो तीन जनाको मृत्यु, विश्वभर तरङ्ग